पपअप नेटवर्क, पप-अप विज्ञापन ट्राफिक, पप-अप विज्ञापन खरीद गर्नुहोस्
सस्तो पप-अप विज्ञापन खरीद गर्नुहोस्
केवल प्रति आगंतुक $ ००००१ बाट उच्च गुणवत्ता पप-अप विज्ञापन यातायात पाउनुहोस्।
पप-अप विज्ञापन के हो?
पप-अप विज्ञापनहरू प्राय: वेबसाइटहरू द्वारा नियोजित गरिन्छ विज्ञापन सामग्रीलाई आगन्तुकको ध्यानको अगाडि धक्का दिन। पप अप्सले १ 1990 2000 ० र २००० को दशकमा पहिलो ब्राउजरमा आधारित पप-अप ब्लकरहरू देखा पर्‍यो।
उनीहरूका सगे भाई, होभर विज्ञापन (लाईटबक्स विज्ञापन पनि भनिन्छ) पछि दृश्यमा आइपुगे र आज प्राय: प्रयोग गरिन्छ। पप-अपको विपरीत, होभरले उही ब्राउजर विन्डो वा ट्याबमा प्रयोगकर्ता खुल्ला थप्दछ। पृष्ठको बीचमा एक लाइटबक्स खुल्छ, वास्तविक पृष्ठ सामग्रीलाई अस्पष्ट पार्दै। यो विधि प्रायः समाचार र मिडिया साइटहरू द्वारा नियोजित गरिएको छ, तर कर्पोरेट वेबसाइटहरूमा थप्न सजिलो छ, जसले उनीहरूलाई सामग्री वा प्रमोशनहरू हाइलाइट गर्न चाहने विपणनकर्ताहरूको लागि बढ्दो प्रवृत्ति बनाएको छ।
प्रत्यक्ष भ्रमण गर्नुहोस्
पृष्ठ समीक्षा PER दिन
पप-अप विज्ञापन को बढावा के गर्न सक्नुहुन्छ?
सीसा र साइन अप उत्पन्न गर्नुहोस्।
अनलाइन खरीदहरू ड्राइभ गर्नुहोस्।
अनुप्रयोग डाउनलोडहरू बढाउनुहोस्।
ब्रान्ड जागरूकता बढाउनुहोस्।
विज्ञापन आर्बिटरेज बूस्ट गर्नुहोस्
विज्ञापन राजस्व अधिकतम गर्नुहोस्।
वेबसाइट पृष्ठदृश्य वृद्धि गर्नुहोस्।
पप-अपलाई बढावा दिनुहोस्
पप-अप दृश्य बढाउनुहोस्।
अलेक्सा बुस्ट गर्नुहोस्
एलेक्सा श्रेणीकरण सुधार गर्नुहोस्।
विशिष्ट देशहरू, राज्यहरू, शहरहरू वा DMA क्षेत्रहरूबाट आएका आगन्तुकहरू प्राप्त गर्नुहोस्।
लक्षित डोमेन नाम र स्रोतबाट मात्र ट्राफिक प्राप्त गर्नुहोस्।
अपरेटिंग प्रणाली मार्फत मोबाइल, ट्याब्लेट र डेस्कटप उपकरणहरू लक्षित गर्नुहोस्।
विशेष वाहकहरू द्वारा दर्शकहरूलाई लक्षित गर्नुहोस्
र Wi-Fi जडानहरू।
एक श्वेतसूची बनाउनुहोस् र लक्षित अनुप्रयोगहरूबाट मात्र आगन्तुकहरू प्राप्त गर्नुहोस्।
तपाईंको उद्योग वा सेवालाई निर्दिष्ट उद्योग वा शीर्षकहरूको लागि लक्षित गर्नुहोस्।
विशिष्ट ब्राउजरबाट आगन्तुकहरू लिनुहोस् वा बहिष्करण सूची बनाउनुहोस्।
वेब वा इन-एप सूची प्रकारहरूमा तपाईंको अभियानहरू चलाउनुहोस्।
पप-अप विज्ञापनले कसरी काम गर्दछ?
१ 1941 XNUMX१ मा पहिलो टेलिभिजन विज्ञापनदेखि पप-अप विज्ञापन एक प्रभावी विज्ञापन प्लेटफर्मको रूपमा प्रमाणित भएको छ। धेरै जसो दर्शकहरूले टेलिभिजन कार्यक्रमहरू, संगीत पप-अपहरू, इन्टरनेट कार्यक्रमहरू, र इन्टरनेटमा भाइरल क्लिप हेर्छन्, विज्ञापनदाताहरूले बजारमा रुचि लिन सक्छन्। । अनलाइन प्रकाशकहरू टेलिभिजनमा देखिएका प्रमाणित विज्ञापन विधिहरू अनुकूलन गर्दै छन् र नयाँ विज्ञापन ढाँचाहरू आविष्कार गर्दै छन् जसले प्रयोगकर्ताको रुचि उत्पन्न गर्दछ र विज्ञापन राजस्व वृद्धि गर्दछ। पप-अप विज्ञापनहरू सेवा गरिन्छ र फोगी विज्ञापनहरू जस्तै पप-अप विज्ञापन सर्वर द्वारा ट्र्याक गरिन्छ। पप अप विज्ञापनको साथ तपाईंको वेबसाइट मुद्रीकरण गर्नुहोस् र अत्यधिक आला प्रासंगिक पप अप विज्ञापनहरू मार्फत पैसा कमाउनुहोस्।